/Blog/Gallery/Ngabe u-Orlistat usebenza kanjani njengomuthi wokulahlekelwa kwesisindo?
Posted on 03 / 02 / 2020 by 阿斯劳 wabhala ku Gallery.
Ngokusho kwedatha evela kuWorld Population Review, i-United States isezingeni le-12 emhlabeni wonke ngenxa yokukhuluphala kwabantu bakhona. ICentre for Disease Control (CDC) ilinganisela ukuthi ama-36.9% abantu abadala baseMelika abaneminyaka yobudala engama-20 baneminyaka yobudala obukhulu, ngokususelwa kwimininingwane eqoqwe ngonyaka we-2016.
Izibalo ezisemthethweni zikhombisa ukuthi ama-41.1% abesifazane, kanye nama-37.9% amadoda - noma ngaphezulu kwamaMelika ayizigidi ezingama-160, alwa nokukhuluphala. Izibalo zamanje zikhombisa ukuphindwe kabili kokukhuluphala kwabantu baseMelika kuleminyaka engamashumi amathathu edlule.
Ngeshwa, idatha ayibukeki ingcono kakhulu entsheni yaseMelika, noma. Cishe i-15% yayo yonke intsha nezingane zikhuluphele ngokweqile noma zikhuluphele, okuphindwe kathathu uma kuqhathaniswa nama-1980.
Ngokwemininingwane evela kwi-The State of Obesity, idatha yakamuva evela ku-Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), ikhombisa ukuthi izifundazwe eziyisishiyagalolunye zinamazinga okukhuluphala angaphezu kuka-35%. I-Kansas, iFlorida, iNew Mexico, i-Utah, iMissouri, iMinnesota neNew York bonke babona amazinga okukhuluphala enyuka kubantu abadala nasezinganeni phakathi kuka-2017 no-2018. (1,2)
Ngakho-ke, kungani iMelika ibhekene nobhubhane lokukhuluphala oluthinta abantu abadala nezingane ezweni lonke? Ukhuluphala kunezixhumanisi eziqinile zokukhetha indlela yokuphila engemihle nemikhuba yokudla. Izingane zidlala ngaphandle kakhulu kunangaphambili ngeminyaka yama-1980s, ngentuthuko kwezobuchwepheshe zokwethula imidlalo yevidiyo kanye nezinye izindlela zokuzijabulisa ezigcina izingane zihlala phansi.
Abantu abadala banezinsizakalo zokuzijabulisa nezokulethwa kokudla okutholakala kalula ngezikhathi zewashi. Konke ukusebenziseka okwengeziwe ezimpilweni zethu kunezela ekusetshenzisweni ngokweqile kwama-kilojoule, futhi hhayi ukuzivocavoca okwanele kokushisa amandla atholakalayo.
Ukudla amakhalori amaningi kakhulu wezidingo zakho zamandla kuholela emzimbeni, kugcine amandla asele njengamafutha. Ukukhetha indlela yokuphila engeyinhle, ukudla okunesisindo esinamakhalori amaningi anama-carbohydrate namafutha amabi, futhi ukuzivocavoca okuncane, kuyindlela yokukhuluphala - Konke okudingekayo yisikhathi.
I-AASraw ingumhlinzeki wokunciphisa isisindo se-powder-Orlistat powder.
Sicela uchofoze lapha ukuthola imininingwane yamanani. Oxhumana nathi
1. Yini i-Orlistat?
Ukukhuluphala kukhawulela ikhwalithi yempilo yomuntu othintekile. Kodwa-ke, ngenkathi abantu abaningi baseMelika bebona ukuthi ukukhuluphala ngokweqile kungayilimaza impilo yabo, bambalwa kakhulu abathatha isinqumo sokwenza okuthile ukunqanda ukukhula kwabo ekubeni yisidudla.
Iningi labantu abakhuluphele ngokweqile nabakhuluphele abanalo ulwazi nesiyalo esidingekayo ukwenza ukuguqulwa komzimba noma ukudla okunciphisa umzimba. Kulabo abaqala ukuguqulwa komzimba, abangaphansi kwama-5% bayakwazi ukufeza isisindo somgomo wabo.
Iqiniso ngukuthi ukulahlekelwa ngamafutha omzimba amaningi uma usukhuluphele noma ukhuluphele kuyinselelo okubonakala sengathi bambalwa abangayinqoba. Ukushintsha imikhuba yokuphila, ukuguqula indlela odla ngayo, nokuqala uhlelo lokuzivocavoca kudinga inani elikhulu lokuzinikela egameni lomuntu okhuluphele ngokweqile.
Ngaphandle kokuholwa nokuphefumulelwa, umuntu omningi ulahlekelwe ugqozi ngokuguqulwa komzimba wakhe, okubenza babuye imikhuba elimazayo.
Ukuthuthuka kwesayensi yokudla okunempilo eminyakeni engama-20 edlule kukhiqize intuthuko ethokozisayo nejabulisayo kuzisombululo zamakhemikhali zokulawula nokwelapha ukukhuluphala. "I-grail engcwele" yocwaningo lwe-pharma ukudala iphilisi lokunciphisa isisindo esivumela abantu abakhuluphele ukuba babuyisele imizimba yabo ku-BMI enempilo.
Ungase uzithole ungabaza noma imuphi umsoco noma udokotela okutshela ukuthi kunephilisi eliphumelelayo lokwehlisa isisindo sokukhuluphala.
I-Orlistat, ngenye indlela eyaziwa ngamagama ayo ohlobo lwe-Alli ne-Xenical, inamandla okuba isidakamizwa sokulahlekelwa isisindo esinikeza abantu abakhuluphele ithuba lokubuyisela imizimba yabo empilweni.
Abantu abakhuluphele ngokweqile bangathenga i-Orlistat ngaphezulu kwekhawunta ku-60mg (Alli). Uhlobo lwe-120mg (Xenical), ludinga incwadi kadokotela ukuze ithengwe futhi isetshenziswe. Kunezinguqulo eziningi ezijwayelekile ezitholakala ku-inthanethi futhi.
I-Orlistat isidakamizwa esenzelwe ukugcwalisa uhlelo lokudla nokuzivocavoca komuntu. Ngakho-ke, asikwazi ukuyibiza ngokuthi iphilisi lokulahlekelwa isisindo eliyisimangaliso, ngoba kusadinga ukuthi umsebenzisi enze umzamo ekudleni nasekuzivocavoca umzimba.
Kodwa-ke, imibiko yomsebenzisi iphakamisa ukuthi i-Orlistat iyisidakamizwa esisebenza kahle kakhulu sokusheshisa ukulahleka kwesisindo lapho ilawulwa kanye nemihlahlandlela efanele yokudla okunempilo nokuzivocavoca kwezidingo zomuntu okhuluphele
Abantu abadala abaneminyaka yobudala ephakathi kweyi-18 ubudala bangathenga amaphilisi we-60mg Orlistat ngaphezulu kwekhawunta, inqobo nje uma benama-body Mass Index (BMI) angama-25 noma ngaphezulu. Abantu abakhuluphele ngokweqile abane-BMI engaphezu kwama-30 bangavakashela udokotela wabo ukuthola umuthi wamathebhulethi we-120mg Orlistat ongawasebenzisa ndawonye ukunciphisa isisindo sokudla.
Odokotela bangavuma futhi ukusetshenziswa kwenguqulo ye-120mg kubantu abane-BMI abangaphansi kwama-27, uma bebhekene nezinye izinkinga zempilo, ezinjengoshukela noma umfutho wegazi ophakeme. Labo bantu abasebenzisa i-Orlistat ngaphansi kokuqashwa kukachwepheshe wezokwelapha bangafaka isicelo sokuthi umshuwalense wabo ukhokhe izindleko zomuthi.
Kodwa-ke, akubona bonke abomshuwalense abangabopha ukwelashwa. Ukuthola umhlinzeki we-Orlistat ku-inthanethi kulula kakhulu, futhi imihlahlandlela yentengo ye-Orlistat yabathengisi abakwi-inthanethi iyahlukahluka, kuya ngedumela nekhwalithi.
Ngakho-ke, u-Orlistat usebenza kanjani?
I-Orlistat ivimba ipheshana le-GI ekutholeni amanoni ekudleni okudingayo. Ngenxa yalokhu, amafutha angenakuphikiswa ekudleni kwakho adlula ngohlelo lwakho lwesisu, lapho umzimba uwudlula khona ngendaba eyinqaba.
Ama-carbohydrate namaprotheni aqukethe ama-kilojoule angama-4 wamandla kuyo yonke igramu. Noma kunjalo, igramu yamafutha iqukethe ama-9-calories. Ngakho-ke, umqondo ngemuva kwe ukusetshenziswa kwe-Orlistat ukuvikela abantu abakhuluphele ekutholeni lokhu kudla okune-calorie-dense.
Abantu abakhuluphele ngokujwayelekile badla ukudla okunamafutha amaningi, futhi ukukhetha kwabo ukudla akunampilo. Ngokukhawulela ukudla kwekhalori nokushintsha ukudla komuntu okhuluphele okokukhethwa kukho okunempilo, umuntu okhuluphele ngokweqile uzoqala ukubona imiphumela esheshayo yeviki neviki ekuguqulweni komzimba wabo.
Kodwa-ke, abantu abakhuluphele ngokweqile bangathatha iminyaka emi-3 kuye kwemi-5 yokuzibophezela ekuguqukeni kokudla, ukuzivocavoca nezindlela zokuphila, ngaphambi kokuba babuyela kwi-BMI enempilo.
Ukuhlala sigxilile oguqukweni lokulahlekelwa isisindo salobukhulu kuyinselele kunoma yimuphi umuntu. Ngakho-ke, abantu abakhuluphele ngokweqile bangakwazi ukufaka uhlelo lwabo lokudla nokuzivocavoca nokusebenzisa i-Orlistat ukusheshisa imiphumela.
2. Ingabe i-Orlistat ivunyelwe njenge ephephile ukuze isetshenziswe yi-FDA?
Njenganoma yisiphi isidakamizwa, i-Orlistat idlule ekuhlaziyeni nasekuhlolweni kwe-FDA ngokucophelela. Ukuvunywa kwe-Orlistat FDA kudlule ngo-1999 ngaphansi kwenombolo ye-CAS 96829-58-2.
I-FDA ivivinye izinhlobo ezinomkhiqizo zomuthi ezilingweni zomtholampilo ngonyaka we-1999, ivuma uhlobo lwe-Xenical lomuthi ofanele ukusetshenziswa kanye nokuholwa ngudokotela oqeqeshiwe. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi i-Xenical itholakala kuphela ngaphansi kwemithi kadokotela.
I-FDA igunyaze u-Alli (60mg Orlistat) njengokuphephile ukuthi isetshenziswe kubantu abakhuluphele ngaphezulu kweminyaka engu-18 ubudala. Noma kunjalo, inguqulo ye-60mg iyatholakala ukuthi ithengwe ngaphezulu kwekhawuntara. Ngenkathi uhlobo lwe-OTC lusetshenziswa kuphela ngokudla okukhawulelwe kokhalori, okunamafutha aphansi, abukho ubufakazi obuphathekayo bokuholwa okudingekayo lapho abantu abakhuluphele ngokweqile Thenga i-Orlistat phezu kwekhawunta.
I-FDA ilandelela yonke imibiko yemiphumela emibi kubasebenzisi be-Alli ne-Xenical, izinhlobo zomkhiqizo ze-Orlistat. Le nhlangano ithole izinkulungwane zezaziso ezivela kubasebenzisi maqondana nemiphumela emibi nezehlakalo ezingezinhle ezenzeka ngesikhathi kusetshenziswa umuthi.
Ngale mibiko eminingi engemihle yezempilo, kungesabisa abanye abasebenzisi abangahle babe kude nokuyifaka kuhlelo lokunciphisa umzimba. Kodwa-ke, iqiniso ukuthi izehlakalo ezimbi zempilo ezibikwe ku-FDA ngumphakathi, zenziwa kuphela nge-Alli neXenical, hhayi i-Orlistat ngokuqondile.
Kuze kube manje, abukho ubufakazi bomtholampilo obusikisela ukuthi i-Orlistat ibhekene nezehlakalo ezimbi zezempilo ezitholwa ngabasebenzisi baka-Alli nabakwaXenical. Kungenzeka impela ukuthi lezi zinkinga zingavela kwesinye isithako esisetshenziselwa ukwenziwa kwemithi.
I-FDA iyaqhubeka nokuphenya imiphumela emibi nezinkinga ngobuthi ezungeze ukusetshenziswa kwe-Alli ne-Xenical. Kodwa-ke, kusamele sikhiphe noma yisiphi isitatimende esiphathelene nokuqeda ukuphepha nokuvunywa kwemithi.
I-FDA iphinde ibe nokukhathazeka okuthile mayelana nokuthi ithola imibiko kusilinganiso esisodwa kuphela kweziyishumi ezimbi. Le nhlangano iphinde yaqhuba izivivinyo ngobungozi besibindi se-Alli kubasebenzisi ngo-1.
Izilingo zifaka ukuhlaziywa kwe-datha yangaphambi kokuya ekliniki, emtholampilo, ngemuva kokuthengisa, kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa okuhambisana nokuqina kwesibindi kanye nokulimala ngenxa yokusebenzisa umuthi we-Xenical branded. (3)
Imiphumela yocwaningo iphetha ngokuthi iXenical ayixhumeki ekwakheni ubuthi obunamandla besibindi noma ukulimala.
Kodwa-ke, i-FDA iveze amacala ayi-12 ekuhlaziyeni kwemakethe okuhlobene nokulimala kwesibindi okubangelwa iXenical, nelilodwa ngokusetshenziswa kwe-Alli. Ukuqhubeka nokucwaninga kobufakazi kukhombisa ukuthi ezinye izinto ezinomthelela, njengokuphelelwa ngamanzi emzimbeni, kanye nokusebenzisa i-off-label noma ukusetshenziswa kwezidakamizwa, zingaba imbangela yokulimala kwesibindi okukhulu kulezi zimo. (4)
3. I-Orlistat njenge-Weight Loss Drug
Ngokuzayo lapho uhamba phansi endaweni yokungezelela e-GNC yangakini, bheka isigaba sokulahleka kwamafutha. Uzothola inqwaba yemikhiqizo yokulahlekelwa isisindo kufomethi yamandla nephilisi. I- isisindo sokulahlekelwa kwesisindo ibhizinisi liyimboni yamadola ayizigidi eziyizinkulungwane, futhi kunemikhiqizo eminingi ezama ukubusa lesi sikhala.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-Orlistat iyisidakamizwa sokulahlekelwa isisindo, hhayi isithasiselo sokulahlekelwa isisindo. Uma uthatha izithasiselo zokulahlekelwa isisindo eziningi kakhulu, ungathola imiphumela emibi ethambile ye-thermogenic, njengesisu esibuhlungu noma ukwanda okuncane kokugqugquzela kanye nokushisa.
Kodwa-ke, ukusetshenziswa kabi noma ukuhlukunyezwa kosokhemisi isisindo somzimba, njenge-Orlistat, kungahle kube nemiphumela emibi emibi engathinta inhlala-kahle yakho isikhathi eside.
I-Orlistat isebenza kahle, futhi abanye abasebenzisi banganquma ukukhulisa umthetho olandelwayo ukuze bathuthukise imiphumela yabo. Kodwa-ke, leli qhinga liqinisekile ukufaka umsebenzisi enkingeni enkulu ngempilo yakhe. Sebenzisa i-Orlistat kuphela ngokuhlangana nokuqondiswa kwezokwelapha, ikakhulukazi uma usebenzisa ifomethi ye-120mg.
A: Ungalahlekelwa Kanjani Isisindo ngokuthatha i-Orlistat?
Lapho wenza ukusetshenziswa kwe-Orlistat yokuncipha kwesisindo, umsebenzisi kufanele alandele izeluleko kudokotela wezokwelapha, ikakhulukazi lapho esebenzisa ifomu lomuthi i-120mg. Ngaphambi kokuthi lowo muntu aqale uhlelo lokunciphisa umzimba, kudingeka abe nokuqonda okuyikho ukuze enze ushintsho oluhle lomzimba.
Umuntu okhuluphele ngokweqile noma omkhulu ngokweqile udinga ukuqonda ukuthi umuthi awusiyo impendulo yezinkinga zawo. Isixazululo kuphela sokwehla kwesisindo esanele isikhathi eside ngokulungiswa kokudla, izindlela zokuphila, kanye nokungenisa uhlelo lokuzivocavoca oluqhubekayo.
Ngaphandle kwale mindset, umuntu okhuluphele noma okhuluphele ekugcineni uyozama ukuncika ekusetshenzisweni ngokweqile kwemithi lapho engayiboni imiphumela ayifunayo emizamweni yakhe. Ukusetshenziswa ngokweqile kwalesi sidakamizwa sokulahla isisindo kungabandakanya ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi kakhulu engalimaza impilo yomsebenzisi.
Uma usebenzisa i-Orlistat nganoma iyiphi indlela, qiniseka ukuthi ulandela imiyalo yemithamo ebekwe esitsheni, noma usokhemisi ekhipha umuthi. Isilinganiso se-Orlistat zingahluka ngokuya nge-BMI yomuntu. Kodwa-ke, ungathathi umuthi isikhathi eside kunesibekiwe, noma ufakwe kuhlu kufakwa yomkhiqizo.
Abantu abakhuluphele nabakhuluphele ngokweqile bangasebenzisa i-Orlistat eceleni kokudla okukhethekile, okunamafutha aphansi, okuvimbela ikhalori. Lapho kuhlelwa uhlelo lokudla komuntu, izazi zokudla kufanele ziqinisekise ukuthi amanoni awabheki ngaphezu kwama-30% wamakhalori aphelele kunoma yikuphi ukudla.
Umuntu okhuluphele ngokweqile kufanele alandele uhlelo lokudla nokuzivocavoca, futhi alinganise i-Orlistat ngokuyalelwa ngudokotela wabo. Ama-protocols amaningi akhipha imithamo emithathu yemithi usuku lonke ihlukaniswe ngokulinganayo.
Uma umsebenzisi weqa ukudla, khona-ke kufanele weqe umthamo we-Orlistat odingekayo kuleso sidlo.
Uma weqa ukudla noma udla isidlo esingenawo amanoni, weqa umthamo wakho we-Orlistat walowodlo. Umsebenzisi kufanele aqale nokunaka amalebula wokudla kokudla. Funda ngohlu lwezithako nokunezakhi, futhi uvikele ukudla okunamafutha amaningi.
I-Orlistat nayo ingaphazamisa ukumuncwa okufanele kwamavithamini ancibilikiswa amanzi ekudleni kwakho. Ngakho-ke, iziguli kufanele zibuze udokotela wazo ukuthi zincome uhlobo lwevithamini abangalungenisa ngenkathi besebenzisa umuthi.
Abasebenzisi kufanele futhi bahlole umthamo wabo kanye nokusebenzisa umuthi. I-Orlistat umuthi onamandla wokusebenzisa kabi iskripthi. Ngakho-ke, abanye abantu bangafaka emithini yakho uma unganaki ukusetshenziswa kwakho.
Thatha noma yiziphi izithasiselo noma eminye imishanguzo okungenani amahora ama-2 ngaphambi komthamo wakho we-Orlistat. Leliqhinga lokudonsa livimbela noma yikuphi ukusabela okungekuhle nezinye izidakamizwa okungenzeka ukuthi uzisebenzisa. Uma ngabe unolunye uhlobo lwemithi, qiniseka ukuthi utshela udokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa i-Orlistat.
B: Yini Okufanele Ngiyigweme Ngenkathi Ngisebenzisa I-Orlistat?
Lapho uthintana nodokotela wakho mayelana nempilo yakho nohlelo lwakho lokulwa nokukhuluphala, qiniseka ukuthi uxoxa nazo zonke ezinye izindaba zakho zezempilo nodokotela wakho. Udokotela udinga ukuthi aqaphele yonke imishanguzo oyithatha njengamanje ngaphambi kokuba anikeze i-Orlistat.
Eminye imithi ingadala ukuphikisana nezinye izidakamizwa, kuholele kumiphumela emibi kakhulu kumsebenzisi. Kufanele wazise udokotela wakho ngokusebenzisa kwakho noma imuphi umuthi olandelayo.
Imithi yesifo sikashukela somlomo noma ukusetshenziswa kwe-insulin
I-cyclosporine (iSandimmune, iNeoral, iGengraf)
I-Digoxin (Lanoxin, digitalis, Lanoxicaps)
I-Levothyroxine (Levoxyl, Synthroid, Levothroid)
Imithi yokunciphisa igazi njenge-warfarin (Coumadin)
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi lolu akulona uhlu olubanzi lwezidakamizwa ezingadala izingqinamba nokusetshenziswa kwe-Orlistat.
Yenza isikhathi sokubonisana nodokotela wakho ukuthi nixoxe ngayo yonke imishanguzo kadokotela, izithasiselo, neminye imikhiqizo ye-OTC oyisebenzisayo engase ibangele ukusebenzisana lapho usebenzisa i-Orlistat.
Akumelwe ngaphansi kwanoma yiziphi izimo thatha i-Orlistat ngaphandle kokuthinta uchwepheshe wezokwelapha kuqala. Ngenkathi uhlobo lwe-60mg lutholakala kalula ukusetshenziswa kwe-OTC, umsebenzisi kufanele aqhubeke abonane nodokotela wezokwelapha ngaphambi kokuwengeza ohlelweni lwabo lokudla nokuzivocavoca.
Uma uthathwa ngemithamo ephezulu noma isikhathi eside, i-Orlistat ingadala izinkinga zempilo ezinzima. Labo bantu abacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi banqwabelanise ngokweqile e-Orlistat kufanele bashayele i-hotline usizo hotline ngokushesha futhi bacele i-ambulensi.
Iziguli kufanele zigweme ukuphuza i-Orlistat uma zinokungezwani nezinye zezithako ekwelashweni. Ungathathi i-Orlistat uma ubhekene nanoma yiziphi zalezi zimo zempilo ezilandelayo.
Isifo se-malabsorption esingamahlalakhona
Isifo sikashukela thayipha mina noma II
Izinkinga zokudla ezifana ne-anorexia noma i-bulimia
Uma njengamanje usebenzisa omunye umuthi wokulahlekelwa isisindo noma imikhiqizo ye-OTC
4. Yimiphi Imiphumela Ongayilindela Ngokusebenzisa i-Orlistat?
Kubalulekile ukuthi abantu baqonde ukuthi ayikho into efana nokuthi "umuthi oyisimangaliso wokunciphisa isisindo." Ngenkathi ukusetshenziswa kwe-Orlistat eceleni kokudla okunomkhawulo wekhalori nohlelo lokuzivocavoca kuzosheshisa ukulahleka kwesisindo kubantu abakhuluphele noma abakhuluphele ngokweqile, badinga ukusetha okulindelwe okungokoqobo ngenqubo.
Imiphumela ye-Orlistat ziyehluka kuye ngomuntu, futhi mhlawumbe ngenxa yokuthi wonke umuntu une-metabolism eyingqayizivele nohlobo lomzimba. Kodwa-ke, ungalindela ukuthi isilinganiso sokulahlekelwa kwamafutha sibe sesilinganisweni, futhi ukusebenzisa lo muthi kungakusiza ukuthi uchithe amaphawundi ambalwa ngeviki kunokudla namasu okuzivocavoca uwedwa.
Kodwa-ke, ukulindela ukulahleka ngokushesha kwamafutha akunangqondo. Amathuba ukuthi kwathatha isiguli iminyaka ethile, mhlawumbe ngisho namashumi eminyaka, ukufinyelela isimo saso sokukhuluphala ngokweqile. Ngakho-ke, ukulindela ukuthi amanoni ancibilike ubusuku bonke, noma ngisho ezinyangeni ezimbalwa, kuzoshiya umsebenzisi ezizwa edangele futhi edumele ngemiphumela yabo.
Odokotela bachaza ukwehla kwesisindo somtholampilo njengokunciphisa isisindo somzimba womuntu, ngo-5% noma ngaphezulu esikhathini esingaphezu konyaka. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ngaphezu kuka-40% we Abasebenzisi be-Orlistat bafeze lo mgomo, uma nje belandela izeluleko zobungcweti zikadokotela nodokotela wezempilo.
Lolu cwaningo lukhombisa nokuthi labo bantu ababedla ukudla okunomkhawulo wekhalori, kanye nokuthola ukuzivocavoca njalo, kanye nokusebenzisa i-Orlistat, balahlekelwe ngama-lb ama-5.7-lbs angaphezu kweqembu lokulawula ababengasebenzisi i-Orlistat. (5,6)
(1) Yini Izinzuzo Zokusebenzisa i-Orlistat?
Kunenzuzo enkulu yokusebenzisa i-Orlistat njengengxenye yohlelo lokulahleka kwesisindo oluhlelwe kahle futhi lubhekwe kahle. Umuthi uyasebenza ekuvimbeleni umzimba ekufuneni amafutha, ngaleyo ndlela kunciphise ngokumangazayo ingxenye enkulu yamakhalori aphelele afakwe yisiguli.
Kodwa-ke, ngenkathi i-Orlistat iyisengezo esiwusizo ekudleni kokulahlekelwa isisindo, futhi ikhiqiza imiphumela ephawulekayo, asikwazi ukugomela ukuthi abantu akufanele basebenzise lesi sidakamizwa njenge-crutch. Labo bantu abathembele kudokotela noma isengezo njengetshe legumbi lohlelo lwabo lokwehlisa isisindo bazothola imiphumela yokungabi nalutho.
Abanye abantu abenzi zinguquko kuzindlela zabo zokudla noma zokuvivinya umzimba futhi, esikhundleni salokho, bathembela ku-Orlistat ukwenza umsebenzi. Kodwa-ke, laba bantu bazithola bedumele ngemiphumela yabo yokulahlekelwa isisindo.
Izinzuzo ze-Orlistat uhlelo lokwehlisa isisindo olunesakhiwo esichaziwe nezinhloso ezicacile. Akunakwenzeka ukuthi isiguli sizoba nolwazi noma isisusa sokuqedela ukuguqulwa komzimba sodwa.
Ngakho-ke, ukuqasha umuntu okondlayo kanye nomqeqeshi, nokulandela uhlelo lokudla nokuzivocavoca umzimba kumele kube kunoma ngubani owenza uhlelo lokunciphisa umzimba.
Iningi labantu abakhuluphele ngokweqile nabakhuluphele kakhulu bathola ukuthi bathola ukuncipha okukhulu emavikini amabili okuqala okuqala ukudla okunempilo nokuzivocavoca umzimba - futhi lokho kungangaphambi kokwethula noma iziphi izithasiselo noma izidakamizwa ezinjenge-Orlistat.
Kodwa-ke, abanye abantu bangadonsa kanzima ukuze banciphise isisindo noma ngabe balandela uhlelo olufanele lokudla nokuvivinya umzimba. Abanye bangathola ukuthi inqubekelaphambili yabo yenqubekela phambili isebenzisa izindlela zemvelo. Lababantu bangathola ukuthi i-Orlistat ibazuzisa kulesi simo, ibavumele ukuba balahlekelwe isisindo ngendlela eqhubekayo kukho konke ukuguqulwa komzimba wabo.
(2) Yiziphi Izingozi Zokusebenzisa i-Orlistat?
Abantu abacabanga ukusebenzisa i-Orlistat kufanele bathathe isikhashana ukubuyekeza uhlu lwemiphumela emibi ye-Orlistat ehambisana nokusetshenziswa kwesidakamizwa sokulahlekelwa isisindo. I-Orlistat ngumuthi onamandla owenzelwe ukusetshenziswa eceleni kokudla okunomkhawulo wekhalori okuhlelelwe umuntu okhuluphele ngokweqile ngumuntu onomsoco ofanelekayo.
Uhlobo lomuthi lwe-OTC lungatholakala kalula ukuthi luthengwe ngaphandle kokuthola umuthi, kepha akekho umuntu okufanele asebenzise i-Orlistat ngaphandle kokukhuluma nodokotela wabo kusengaphambili.
Ezivivinyweni zemitholampilo ezibandakanya ukuphathwa kwe-Xenical kwiziguli, ama-27% athola amabala ezinamafutha ezingutsheni zawo zangaphansi, ama-24% wabasebenzisi abathola igesi elandelwa ukuphuma kokuzenzela kokuzenzela, ama-22% wabasebenzisi bathola ukuqala kokuphuthumayo ngokuzimela, u-11% ukhombise ukwanda kokufika kwabo inani lokuhamba kwamathumbu, kanye nama-8% wokuqothuka okungapheli.
Kwabasebenzisi abaningi, isifo sohudo futhi siwumphumela ojwayelekile wokusebenzisa umuthi, ikakhulukazi lapho uqala ukusebenzisa umuthi we-weightloss.
Imiphumela yokungezwani komuthi ayivelakancane, futhi eminye yemiphumela ejwayelekile abasebenzisi abayibona emasontweni ambalwa okusebenzisa i-Orlistat ifaka okulandelayo.
Amabala noma amanoni ku-underwear yakho
Amafutha ansundu noma anombala osawolintshi osesihlalweni
Ugesi ohambisana nokukhipha amafutha
Isihlalo esikhululekile, ukwanda kokuphuthuma kokungajwayelekile, kanye nokwehluleka komsebenzisi ukulawula ukunyakaza kwamathumbu abo
Ukwanda kokuvama kokunyakaza kwamathumbu
Isicanucanu, ukugabha, Ubuhlungu besisu, isisu, nobuhlungu bobucayi
Ukukhathala nobuthakathaka, izihlalo ezinombala obumba, umchamo omnyama, ukulahleka kwesifiso, ukulunywa, noma ukubukeka kwe-jaundice (kuphuzi kwabamhlophe bamehlo noma kwesikhumba)
Ezinye izingqinamba ezingavamile iziguli ezihlangabezana nazo lapho zithatha i-Orlistat zifaka okulandelayo.
Izinkinga nezinsini namazinyo
Ukuthuthukiswa kwezimpawu ezifana nokubanda
Ukuthuthukiswa kwezimpawu ezinjengomkhuhlane
Ubuhlungu bekhanda nobuhlungu emuva
Thambisa emisebeni yesikhumba eyedlulele
Abasebenzisi kufanele bazi ukuthi lolu akulona uhlu oluphelele lwemiphumela emibi engaqhamuka lapho kusetshenziswa i-Orlistat. Uma uhlangabezana nemiphumela emibi noma impendulo engemihle kulo muthi, bika okuhlangenwe nakho kwakho ku-FDA ku-1-800-FDA-1088.
5. Yini Abasebenzisi Abayishoyo nge-Orlistat?
Ukubheka izibuyekezo ze-intanethi ngabasebenzisi, kuholela emiphumeleni ehlukahlukene, kokubili futhi yokulwa nokusetshenziswa kwomuthi. Ukubuyekezwa kwe-Orlistat kususela kubantu abathole imiphumela evelele kulabo abathola imiphumela emibi kakhulu.
Kodwa-ke, kubukeka sengathi iningi lamacala ahilela abantu ababemakhulu, noma ama-BMI angaphezu kwama-27, banokuhlangenwe nakho okuhle ngomuthi. Konke ukubuyekezwa okuhle esikutholile ngomuthi wokunciphisa umzimba kusuka kubasebenzisi abanolwazi ababephethwe ukuguqulwa komzimba ezandleni zikachwepheshe wezokwelapha.
Ngakho-ke, laba bantu bahlele isu labo lokunciphisa isisindo ngendlela efanele. Bonke baqasha isazi sezempilo, bathola udokotela njalo ngekota, futhi banamathela esimisweni sokudonswa kwemithi eselulekwa uchwepheshe wabo wezokwelapha.
Nasi isibonelo semiphumela yangempela ye-Orlistat esiyithole online.
"Igama lami nginguRon, futhi ngangikhuluphele ngangokuthi kwakungcolisa impilo yami. Ngokuhamba ngefasitela, nempilo yami isiwohloka, ngaya kudokotela wami ukuze angisize. I-doc yangixhumanisa nodokotela wezokudla, futhi ngaqonda izidingo zami zekhalori zosuku.
Ngemuva kwezinyanga eziyi-6 ngidla kahle futhi ngisebenza nsuku zonke, ngabona imiphumela emihle, kepha inqubekela phambili yami yaqala ukuma. Udokotela wami uphakamise ukuthi ngizame iXenical (Orlistat). Angizange ngicabange kakhulu ngakho, kepha ukwehla kwesisindo sami kwaqhubeka ngemuva kosuku lwesibili ngisebenzisa umuthi.
Ngemuva konyaka, futhi ngizizwa njengomuntu omusha. Sengimaphakathi kwesisindo sami somgomo, futhi amakhilogremu ayaqhubeka ukuphuma. "
IRon Swanson, Jacksonville, FL, USA.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi akuwona wonke umuntu ozothola lo mphumela, kepha lokhu kuyibhentshini elihle lemiphumela ongayilindela lapho konke kuhamba kahle.
Kulesi sibonelo, imiphumela kaRon ibingumphumela omuhle, kepha lokho akusho ukuthi omunye umuntu akakwazi ukuziphindisela imiphumela efanayo, inqobo nje uma benokwengamela okulungile kwezokwelapha.
6. Izindlela ezibalulekile zokusebenzisa i-Orlistat njenge-Weight Loss Drug
Ukukhuluphala ngokweqile kusongela impilo yabantu baseMelika ezweni lonke. Izinga lokukhuluphala liyenyuka kubo bobabili abantu abadala, intsha, kanye nezingane, kanye neNingizimu ne-Eastern States yase-US okunzima ukuhlaselwa yilolu bhubhane olukhulayo.
Ukukhuluphala kuholela ekuthuthukisweni kwezinkinga eziningi zezempilo ezingamahlalakhona, njengesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme nesifo senhliziyo. Lesi simo sibanga nokufa kwe-18% yabo bonke abantu baseMelika abaneminyaka engama-40 kuye kwengu-85 ubudala.
Abantu abaningi baseMelika baphendukela kuzidakamizwa nezengezo ukubasiza ukuthi basheshise izinhlelo zabo zokwehlisa isisindo. Kodwa-ke, abaningi balaba bantu futhi abenzi okwanele ukushintsha imikhuba yabo yokuphila, ukudla, nokuzivocavoca umzimba ngaphambi kokusebenzisa ezinye izindlela zokwehlisa isisindo.
AbaseMelika badinga ukuqonda ukuthi ayikho indlela enqamulelayo yokulahlekelwa ngamafutha omzimba. Ukuthola ulwazi lokudla okulungile nemikhuba yokuzivocavoca kubalulekile ekubuyiseleni emuva ukulawula isisindo somzimba wakho. Ngaphambi kokusebenzisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa zokwehlisa isisindo ezingaba yingozi, kungcono ukuthi uqinisekise ukuthi udla kahle futhi uzivocavoca kahle kuqala.
Cabanga kuphela ukusebenzisa i-Orlistat ngemuva kokubonisana nodokotela wakho ngemigomo yakho yokunciphisa isisindo. Udokotela wakho uzokuthumela kumondli ofanelekayo ngohlelo lokudla oluhlangabezana nezidingo zakho ze-caloric zokulahleka kwamafutha.
Labo bantu abazama uhlelo lokunciphisa umzimba kufanele baqinisekise ukuthi bakha iqembu elizungeze uma bafuna ukubona imiphumela. Udokotela wakho, umondli wezempilo, i-physiotherapist, kanye nomqeqeshi wakho siqu bakha ithimba lakho lokusekelwa ukuze likunikeze ithuba elihle lokunqoba noma yiziphi izithiyo endleleni yakho zokufeza izinhloso zakho zokunciphisa umzimba.
I-Orlistat ifana nokungeza i-jet fuel enjini esebenza kahle eyenziwe kahle. Lapho iziguli zinendlela yazo yokudla neyokuzivocavoca ngaphansi kolawulo, ukwengeza umuthi wokunciphisa umzimba njenge-Orlistat kungasheshisa kakhulu imiphumela.
Ngaphambi kokuthi bathathe isinqumo sokuthatha i-Orlistat, iziguli kumele zixhumane nodokotela wezempilo ukuze zibone ukuthi ziyahlangabezana yini nemigomo efanelekile yokwelashwa.
Lapho ubuyekeza imiphumela yokuhlangenwe nakho komsebenzisi nge-Orlistat, kuyisikhwama semiphumela esihlanganisiwe. Kodwa-ke, kubonakala sengathi labo bantu abathatha i-Orlistat ngokuyalelwa ngudokotela futhi baqashe iqembu elifanele lokusekelwa bafeza imiphumela abayifunayo.
Ehlangothini le-flip, kunabantu abaningi abanokuhlangenwe nakho okubi ngokusebenzisa i-Orlistat. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bathathe i-Orlistat ngaphansi kokunakekelwa ngudokotela.
I-Orlistat inikela ngabantu abakhuluphele nabakhulu ngokweqile nge-FDA evunyelwe ngaphezulu kwenketho ye-counter yokuthuthukisa imizamo yabo yokulahlekelwa isisindo.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi zonke iziguli ezisebenzisa lesi sidakamizwa, zidinga imfundo maqondana nokuguqulwa kokuziphatha okuqhubekayo ngenkathi zisebenzisa umuthi.
U-Anderson JW, Schwartz SM, Hauptman J, et al. Imiphumela emincane yedosi ye-orlistat kwesisindo somzimba ngobumnene kubantu abanozalo ngokweqile: isonto eli-16, isivivinyo esilawulwa ngamehlo, esinezimpawu eziphindwe kabili. Ann Pharmacother. 2006; 40 (10): 1717-1723
Smith SR, Stenlof KS, Greenway FL, et al. I-Orlistat 60 mg inciphisa izicubu ze-visceral adipose: isivivinyo esinama-24-veki engahleliwe, esilawulwa nge-placebo. Ukukhuluphala (i-Silver Spring). 2011; 19 (9): 1796-1803.
"Umthombo Wentsha": i-NAD + ne-NMN njenge-Supplement
I-Synephrine HCL Powder - Isishisi samafutha nezithasiselo zokwehlisa isisindo Konke Okufanele Ukwazi NgePregabalin